Kedu ka Mgbalị Mgbasa Ozi N'èzí Na-atụle? | Martech Zone
Tuesday, February 24, 2015 Douglas Karr
Anyị na-elegharakarị ohere ịzụ ahịa ndị a na-ahụ anya, anyị anaghị aga otu ụbọchị ma ọ bụrụ na anyị ahụghị ha. Ahịa n’èzí na bọọdụ mkpọsa bụ otu n’ime atụmatụ ndị ahụ. Dika otutu uzo ahia ahia, enwere uzo di iche iche na ohere di iche iche nke ndi ozo apughi inye. Ma nye usoro dị ukwuu, nloghachi na itinye ego na ya nwere ike karịa ọwa ahịa ndị ọzọ.
Billboards nwere ike inwe nnukwu mmetụta maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ niile. Na infographic a site na Signarama na Toronto, ọ bụ ihe na-akpali mmasị karịsịa ịgụ na na ụlọ ọrụ Telecom ọ bụ ya kachasị emetụta. Mara: Ọ dịkwa mma ịhụ na ụlọ ọrụ ihe ịrịba ama na-ahụ mmetụta nke infographics!
Signarama na-enye mkpịsị ugodi atọ iji nwee ihe ịga nke ọma na mbọ ị na-agba n’ahịa ụlọ:
Ebe Kwesịrị Ekwesị - Kọwaa ahịa gị, chọpụta ihe ị chọrọ ịlụ, ma lekwasị anya na mpaghara ndị nwere oke afọ ojuju ndị ahụ.
Nri Ozi - Izi ozi dị oke nkenke na nkenke dị oke mkpa. Nwalee ozi gị na ntanetị iji chọta onye nwere ọnụego ntụgharị ka ukwuu tupu ịzụrụ mgbasa ozi n'èzí.
Pzọ Ntugharị - Ọ dịghị ada ada na agbanyeghị ọwa anyị na-ekwu maka ya, ọ na-eju anyị anya mgbe niile na ọnụ ọgụgụ mkpọsa ndị a na-egbu nke na-enweghị oke oku-omume. Billboard ahia bu ugbua ihe di iche! Gwakọta ozi pụrụ iche na ọnọdụ pụrụ iche na ibe ọdịda pụrụ iche na URL dị mfe nke zoro ezo na engines ọchụchọ.
Tags: ahia ama ahiambadamba nkumeụgbọ ala na-akwụsị mgbasa oziụgbọ ala mgbasa ozibọlịn bọọdụeserese n’alamega ọkụn'ahịa ụlọn'èzí mgbasa ozin'èzí ahịan'èzí signageakwụkwọ ịma ọkwaraquersakaraihe ịrịba amamgbidi mgbasa ozi
Aug 23, 2015 na 11:37 PM
Ama ihe omuma. N'ihe banyere ịzụ ahịa azụmahịa na mpaghara, mbadamba na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ụfọdụ, ndị na-ege ntị na-eme ka ndị na-ege ntị kụrụ aka na-amaghị ihe site na mbadamba bọọdụ ha hụrụ n'akụkụ etiti. Agbanyeghị, bọọdụ mkpọsa - ma ọ bụ usoro mgbasa ozi ọ bụla - kwesịrị iche echiche iji kpalie mmadụ ịzaghachi!